IGAD OO Ka Hadashay Dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe - Hablaha Media Network
IGAD OO Ka Hadashay Dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe
HMN:- Warbixin aay soosartay IGAD ayaa lagu wadaa inuu soo bandhigo dhowaan qorshaha lagu dhisayo maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Qoraal aay dooneyso IGAD ayaa waxaa ku qoran qariirada loo marayo dhismaha maamulka labada Gobol Hiiraan iyo Sh/dhexe oo muddo dheer soo jiitamayay.
“Waxaa ku kulmay magaalada Muqdisho oday dhaqameedyo ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo Sh/dhexe gaar ahaan beelaha Abgaal iyo Xawaadle oo midkiiba ay ka socdeen 45 ruux waxaana la doonayaa in aay 25-ka Augosto, ayaa lesku raacay dhismaha maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe.”ayaa lagu sheegay qoraalkan.
Xafiiska IGAD ayaa sheegay inay ku talinayaan in la sameeyo guddi sare oo wadajir ah, kaasoo fududeynaya howlaha shirka ee maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Qorshaha dhismaha ee maamul u sameynta labada Gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe ayaa waxaa ugu muhiimsan in la soo xulo oday dhaqameedyada shirka iyo in guddi farsamo la dhiso.
Sidoo kale dhismaha ayaa waxaa ka mid ah in laga hadlo awood qeybsiga iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin maamulka iyo weliba guddi dhexdhexaadin.
Qoralka ayaa ku cad in la soo xulo ergo kadibna la dhiso Baarlamaanka oo dooran doono Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka.
Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 8 bilood hakad ku jiray, kadib markii qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan ay diideen inay ka qeyb galaan shirka, hase ahaatee go’aanadii bishan laga soo saaray shirkii Madasha ayaa lagu go’aamiyay in maamulkaas la dhiso ka hor doorashada halka aay wali diidanyihiin Odayasha dhaqanka ee Gobalka Hiiraan.